Home » Politics, Issues » အစိုးရ/မရ
ဘုရင်မျိုး မှတ်ပြီး ကြောက်ရမယ် စိတ်မှာ စွဲနေကြတာ။
အစိုးရ ဆိုတာ ကိုယ့်ကို အုပ်ချုပ်မယ် အပြစ်ပေးမယ် ထောင်ထဲထည့်နိုင်တယ် စသည်ဖြင့်လောက်ပဲ တွေးနိုင်နေသလိုဖြစ်နေကြလို့သာ။
အမေစု ပင်နီ မဝတ်တာ ဘာကြောင့် ? ဆိုတာလေး ဖြေရှင်းထားတာကို ဖတ်မိပြီး သဘောကျနေတာ
ဘယ်သူတက်လို့ ဘယ်ဝါ ခိုင်းလို့ ဆိုပြီးးး နေ့ချင်းး ညချင်းး ပြောင်းလဲဖို့ လုံးဝ မမျှော်လင့်ဘူးးးး
NLD ပါတီဝင်တိုင်း ပင်နီဝတ်ကြပြီး အမေစုဘာ့ကြောင့် ပင်နီမ၀တ်သလဲဆိုတဲ့စိတ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဖြစ်ဖူးတယ်။
အခု အဖြေသိရတော့လည်း ကျေနပ်မိပါတယ်။
ဦးထင်ကျော်ကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်တာကို ကျေနပ်တယ်။
သမ္မတအမည်စာရင်းတင်သွင်းလိုက်တာနဲ့ ဒရိုင်ဘာလို့ ခပ်နှိမ်နှိမ် ရေးကြ ပြောကြတာကို အခြားသူတွေက ဒေါသထွက်ကြပေမယ့်…………
ကိုယ့်အတွက်တော့ အဲဒါကို သိလိုက်ရလို့ ပိုပြီးတောင် လေးစားမိသွားတယ်။
တိုင်းရင်းသားခရစ်ယန် ကို….ဒုသမ္မတခန့်လိုက်တာလေးတော့.. တော်တော်လှ….
မဘသ နဲ့ တော်တော်အဆက်ပြတ်နေပုံပဲ…
ဒေါ်စုက သမတ အထက်ကနေကြိုးကိုင်မှာမို့ အရုပ်သမတ ဘာညာနဲ့ မလေးစားပြောကြသတဲ့
ဗုဒ္ဓဂုဏ်ရည် သာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကတော့ ခရစ်ယာန်ဒုသမ္မတကို ဆန္ဒပြကန့်ကွက်ဖို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေသုံးနေချိန်မှာ ခရစ်ယာန်ဘက်က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စာကို ဖတ်ရတာ တော်တော်ကြီးကိုရှက်မိကြောင်း
ဂျီးဒေါ်နွားကျောင်းခင်ဇော်
ကိုယ့်ဂျီးတော်ရဲ့ နွားတွေ ကိုယ်မကျောင်း ဘူ ကျောင်းမတုန်းး